Budata Communication Ngwanrọ maka Windows
Budata Communication Ngwanrọ
WhatsApp bụ ngwa dị mfe iji wụnye ngwa ngwa ị nwere ike iji na ekwentị mkpanaaka na Windows PC - kọmputa (dị ka ihe nchọgharị weebụ na ngwa desktọọpụ). Nwere ike ibudata ma jiri WhatsApp na ekwentị gị ma ọ bụ jiri ya dị ka ngwa desktọọpụ na kọmputa Windows PC ma ọ bụ Mac gị. Ngwa desktọọpụ WhatsApp na-arụ ọrụ mmekọrịta na ngwa WhatsApp...
Mbugharị bụ ngwa Windows nke ị nwere ike ịbanye na mkparịta ụka vidiyo nụzọ dị mfe, nke a na-ejikarị eme ihe noge agụmakwụkwọ dị anya na nke nwere atụmatụ bara uru ma na-enye nkwado asụsụ English. Otu esi eme oku oku mbugharị? Mgbe ibudata ngwa Mbugharị, anyị abanye site na ịpị abụọ na mmemme ahụ. Na ihuenyo gosipụtara, anyị ji aha...
Enwere ike ịkọwa esemokwu dị ka olu, ederede na mkparịta ụka vidiyo nke mepụtara site na ịtụle mkpa ndị egwuregwu ahụ. Discord, usoro nkwukọrịta kachasị ewu ewu nke ndị egwuregwu na-eji ihe karịrị 100 nde kwa ọnwa na-arụsi ọrụ ike, nde 13.5 kwa izu na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, na oge nkata nkata 4 ijeri kwa ụbọchị, nwere ike iji na Windows,...
BiP Messenger bụ ozi izipu ozi Turkcell na ngwa nkata vidiyo enwere ike iji na ekwentị mkpanaaka (Android na iOS), ihe nchọgharị weebụ na desktọọpụ (Windows na Mac kọmputa). Pịa bọtịnụ Budata Desktọpụ Budata dị nelu iji jiri BiP Messenger, ọrụ izi ozi ngwa ngwa dịka ewu ewu na WhatsApp na Telegram na mba anyị, na kọmputa gị. BiP...
Gịnị Bụ Skype, A Na-akwụ Ya ?gwọ? Skype bụ otu nime ndị kasị eji free video nkata na izi ozi ngwa nụwa nile site na kọmputa na ama ọrụ. Site na ngwanrọ nke na-enye gị ohere ịde ederede, kwuo okwu na nkata vidiyo na-akwụghị ụgwọ site na ,ntanetị, ị nwere ohere ịkpọ ụlọ na ekwentị mkpanaaka na ọnụ ọnụ ọnụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Nzukọ ndị...
Popular ngwa izi ozi mkpanaka Viber dị ugbu a na Windows. Ekele maka ngwanrọ Viber Windows, ị ga-enwe ike izipu ma kpọọ oku na ndị ọrụ Viber na ndepụta gị nefu. Viber Windows software na-akpaghị aka synchronizes kọntaktị, ozi na-akpọ akụkọ ihe mere eme na Viber ngwa na mkpanaka gị na ngwaọrụ. Yabụ ị ga-enwe ike ịkwọ ụgbọala site na...
Mmemme nkata a pụrụ ịdabere na ya ICQ laghachiri na usoro ihe omume ya na nsụgharị ọhụrụ ya ICQ 8. Mmemme izi ozi ahụ, nke gosipụtara onwe ya ọzọ na ntanetị ọhụụ ya na njirimara ọhụụ, ejirila anya webata onwe ya na steeti ọhụrụ. Na nke a kachasị ọhụrụ, nke a kwadebere na njirimara ọhụrụ dị ka tab njirimara na windo mkparịta ụka na Ndenye...
TeamSpeak 3 bụ ihe omume na-ewu ewu karịsịa netiti ndị egwuregwu ma na-enye anyị ohere ịnwe mkparịta ụka otu na olu. Anyị nwere ike iche maka ọgbọ nke atọ nke usoro ihe omume ahụ dị ka usoro edegharịrị kpamkpam na C ++ karịa ụdị nsụgharị TeamSpeak Classic na TeamSpeak 2. Mmemme a, bụ nke gbanwere mgbanwe dị iche iche noge a na-emegharị...
Ekele maka ụdị desktọọpụ nke LINE, ngwa izipu ozi mkpanaka, ịnwere ike ijikọ na akaụntụ EZIOKWU gị na kọmputa gị. LINE, nke na-enye gị ohere isoro ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị ziga ozi, nwere ihe mmado mbụ 250 na ọdịdị ihu ị nwere ike iji mgbe ị na-ezipụ ozi. Anyị ọrụ ndị chọrọ ka ha mobile ozi ahụmahụ na desktọọpụ nwere ike na-agbalị...
Cyber ​​Dust bụ ngwa izi ozi ngwa ngwa nwere sistemụ Snapchat nwere ike ihichapụ ozi na akpaghị aka. Cyber ​​Dust na-enye nhichapụ ozi gị na akpaghị aka mgbe oge ụfọdụ gị na ndị enyi gị na-akparịta ụka ma ọ bụ ndị mmadụ gburugburu ụwa, ọ bụ ngwa enwere ike iji ya na ekwentị yana Windows 10 tablet na kọmputa. na nwere otu usoro dị ka...
Yahoo! Ozi bụ ngwa email nke Yahoo maka Windows 10 kọmputa na ndị ọrụ mbadamba. Anyị nwere ike ịsị na ngwa ozi, nke jikọtara atụmatụ ndị a ma ama nke Windows 10, na-apụta site na ngwa weebụ ma na ntanetị na ojiji. Ngwa ozi ọgbara ọhụrụ nke etinyegoro na Windows 10 bụ Yahoo! Nezie ọ na-akwado Mail, mana ọ naghị amasị ngwa ozi nke Yahoo....
E nyere ndị ọrụ Windows 10 Facebook Messenger maka Windows, mmemme izi ozi nke Facebook kwadebere, ndị ọrụ Windows 10. interface nke ngwa ahụ, nke na-eme ka o kwe omume isoro ndị enyi gị kparịta ụka na-enweghị ịga na peeji Facebook, yiri mmemme nkata ị maara. Site nusoro ihe omume a, ị nwere ike izipu ndị enyi gị nọ na Facebook na ozi,...
Yahoo Messenger bụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ ebe inwere ike izi ndị enyi gị ozi ozigbo ozigbo. Ihe omume a ị na-eji na Yahoo akaụntụ, e-mail, wdg. Ọ na-egosikwa gị banyere ihe ọhụụ na ọrụ ndị ọzọ. Njirimara dịka ebe nkata nchekwa na nkwado firewall, ndekọ na mbipụta mkparịta ụka, yana ịnweta ngwa ngwa gị na ntanetị nwere ike ịba ama na...
Hangouts Chat bụ ikpo okwu izi ozi nke Google maka ndị otu. Ngwa a, nke na-adọta uche na myirịta ya na Facebook Ọrụ, Microsoft Otu, na Slack, na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ azụmaahịa mfe ikwurita okwu. Ngwa azụmahịa dị mfe iji bots nwere ọgụgụ isi ị nwere ike ịkekọrịta dọkụmentị, mpempe akwụkwọ, ihe mmịfe, foto na vidiyo yana mkparịta ụka...
ChatON bụ ngwa izi ozi mkpanaka nke a na-ejikarị na America na France nke Samsung mepụtara. Ngwa nkata na-ewu ewu nwere ndị ọrụ nde 70 na-enye nkwado nasụsụ 63 na mba 237. ChatON, nke ị nwere ike iji na ekwentị gị, mbadamba na kọmputa desktọpụ, bụ ngwa izi ozi nefu ebe ị nwere ike ịmekọrịta otu onye na ndị enyi gị kparịta ụka. Mgbe gị na...
Onye ọkwọ ụgbọ ala vidiyo SplitCam mebere na-enye gị ohere ibupu onyonyo site notu ebe vidiyo gaa nọtụtụ ngwa notu oge. E.g.; Ị nwere kamera weebụ ejikọrọ na kọmputa gị ma ị nweghị ike iji ya na ihe karịrị otu ngwa notu oge. Ọ bụ ezie na nkesa a agaghị ekwe omume na gburugburu Windows, ị ga-enwe ike ịme nkesa a ugbu a. Enwere ike ịkọwa...
Taa, enwere ọtụtụ mmemme ọzọ anyị nwere ike iji, ọkachasị mgbe anyị tụlere etu ngwa nkata olu siri gbasaa. Zello bụ desktọpụ na ngwanrọ mkpanaka na-aga nke ọma netiti ngwa anyị nwere ike ịkparịta ụka. Nihi nkwado cross-platform ya, ngwa ahụ, nke na-enye gị ohere ịme mkparịta ụka ọbụna na ndị enyi gị na-eji mmemme na ngwaọrụ mkpanaka ha,...
Ventrilo bụ otu nime mmemme ewu ewu ebe ndị egwuregwu ịntanetị na-akparịta ụka notu notu. Ihe omume a na-enye ohere ka ndị egwuregwu na-eme ihe nụzọ jikọtara ọnụ noge egwuregwu. Ị nwere ike soro ndị enyi gị kparịta nụzọ dị mfe nebe a na-akparịta ụka nIntanet nke ị ga-eke maka onwe gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike igbochi ndị ị...
Mmemme Voxox so na mmemme nkata efu dị na ma Windows na igwe mkpanaka ndị ọzọ na PC, na-enye ndị ọrụ ohere isoro ndị enyi ha niile kparịta ụka nakwụsịghị akwụsị. Echeghị m na ị ga-enwe nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eji usoro ihe omume, ekele ya mfe na larịị interface na ọtụtụ elu atụmatụ. Ebe ọ bụ na ọ na-enyekwa nkwado maka ịmepụta nọmba...
Ọrụ efu nke na-enye gị ọmarịcha interface iji AOL Instant Messenger kparịta ụka na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ezinụlọ gị na ịntanetị, yana nhọrọ nke ozi ederede ma ọ bụ mkparịta ụka olu vidiyo na kọntaktị AIM. Mmemme izi ozi ngwa ngwa AIM na nchekwa onye ọrụ, menu ozi, atụmatụ nwere ike ịhazi ya Ọ na-enye usoro dị larịị ma dị mfe ma e jiri...
Slack bụ mmemme bara uru, nefu na nke na-aga nke ọma nke na-abawanye nrụpụta azụmaahịa site na ime ka ọ dịrị ndị mmadụ notu notu na ndị otu na-arụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji kparịta ụka. E gosiputara ndị ọrụ ụdị beta nke ụdị Windows nke ngwa ahụ, nke ewepụtara ngwa mkpanaka gam akporo na iOS na mbụ. Slack, nke na-enye gị...
KakaoTalk bụ ngwa nzikọrịta ozi na nkata olu efu nwere ihe karịrị ndị ọrụ nde 100. Ọ dị nnọọ irè na yiri Skype, na ngwa maka Windows, iOS, Android, Blackberry na Windows Phone nyiwe. Njirimara ọdịyo HD dị elu dị mma na ngwa a, nke na-enye ohere izi ozi otu na otu ma ọ bụ otu yana ịkpọ oku na ndị enyi gị. Daalụ maka ọrụ redio dị mfe, ị...
Ripcord bụ onye ahịa nkata desktọpụ ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na mmemme ewu ewu dị ka Slack na Discord. Ị nwere ike iji ngwa ahụ kparịta ụda na ederede gị, nke na-eji akụrụngwa kọmputa na ọkwa kacha nta. Enwere m ike ịsị na ngwa ahụ, nke nwere ọtụtụ atụmatụ ọrụ, nwere ike ịrụ ọrụ ahụ maka onye ọ bụla chọrọ ngwa dị otú ahụ. Ripcord,...
Ọ bụrụ na ị bụ otu nime ndị na-enweta oge imeta enyi ọhụrụ na kọmputa, soro ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị kparịta ụka, ọ bụrụ na ike gwụ gị ịwụli na vidiyo, ọdịyo na mmemme nkata ederede, Camfrog bụ maka gị. ụwa na-akparaghị ókè na Camforg Video Chat, ebe ị nwere ike inwe ohere ikwu okwu na ọgbakọ nasụsụ ọ bụla ịchọrọ, ugbu a, mkparịta...
Outlook bụ otu nime sọftụwia na-aga nke ọma nokpuru Microsoft Office, nrụpụta Microsoft na-ewu ewu na ụlọ ọrụ ngwanrọ. Site nenyemaka nke Outlook, ị nwere ike ijikwa akaụntụ email gị nụzọ dị mfe, ndepụta kọntaktị gị niile, ọrụ na oge nhọpụta site notu ebe. Site na ijikọ akaụntụ email gị na Outlook, ị nwere ike ịlele ma jikwaa ozi-e gị...
TicToc bụ mmemme desktọpụ Windows nke ngwa na-enye gị ohere ịme ozi nefu, oku olu yana isoro ndị enyi gị na ndị enyi gị kekọrịta faịlụ na nyiwe gam akporo na iOS. Na TicToc, nke na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya dị ka foto na vidiyo kachasị amasị gị site na izigara ndị enyi gị ozi notu notu ma ọ bụ nìgwè, ekele maka ụdị Windows akwadoro...
ooVoo bụ mmemme efu na-enye gị ohere isoro ndị enyi gị na ndị ọrụ ibe gị kparịta ụka vidiyo nụwa niile. Na mgbakwunye na ịdị mfe iji na ntinye ya, mmemme ahụ, nke na-abawanye na ewu ewu nihi asụsụ English ya, na-emekwa ka ọdịiche dị na interface ya mara mma. Mmemme na-enye nzikọrịta ozi anya, ederede na ọdịyo na akaụntụ ooVoo ị...